Umthetho Wobugebengu wase-UAE Uyachazwa - Ungabubika Kanjani Ubugebengu? | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Umthetho Wobugebengu wase-UAE Uyachazwa - Ungabubika Kanjani Ubugebengu?
I-UAE - Indawo Yebhizinisi Edumile Nezivakashi
Ngaphandle kokuba ngelinye lamazwe amahle kakhulu emhlabeni, i-UAE futhi iyindawo yebhizinisi neyokuvakasha eyaziwayo. Ngenxa yalokho, izwe, kanye ne-Dubai ikakhulukazi, iyintandokazi eqinile yabasebenzi abavela kwamanye amazwe nabavakashi abavela kuwo wonke umhlaba.
Ngenkathi i-Dubai iyidolobha eliphephe ngendlela emangalisayo futhi elijabulisayo, kuyasiza ezivakashini zakwamanye amazwe ukuqonda Isistimu yezomthetho ye-UAE nokuthi bangaphendula kanjani uma beba a isisulu sobugebengu.
Lapha, i-UAE yethu enolwazi abameli bomthetho wobugebengu chaza ukuthi yini ongayilindela ku- uhlelo lomthetho wobugebengu e-UAE. Leli khasi lihlinzeka ngemininingwane yenqubo yomthetho wobugebengu, okuhlanganisa nendlela yokubika ubugebengu kanye nezigaba zokuqulwa kwecala lobugebengu.
“Sifuna i-UAE kube indawo eyinkomba yomhlaba wonke yesiko elibekezelelayo, ngokusebenzisa izinqubomgomo zayo, imithetho nezinqubo. Akekho e-Emirates ongaphezu komthetho nokuziphendulela. "
Ubukhosi bakhe uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum uyiPhini likaMongameli kanye noNdunankulu wase-United Arab Emirates, uMbusi we-Emirate yaseDubai.
Uhlolojikelele lwe-UAE Criminal Law System
Uhlelo lomthetho wobugebengu e-UAE lusekelwe ngokwengxenye ku-Sharia, indikimba yomthetho ehlanganiswe ezimisweni zamaSulumane. Ngaphezu kwezimiso zamaSulumane, inqubo yobugebengu e-Dubai ithatha umthethonqubo we-Criminal Procedures Law No 35 ka-199. Lo mthetho uqondisa ukufakwa kwezikhalazo zobugebengu, uphenyo lobugebengu, izinqubo zecala, izahlulelo, kanye nezikhalazo.
Abadlali abakhulu abathintekayo ohlelweni lobugebengu lwe-UAE yisisulu/ummangali, umuntu obekwe icala/ummangalelwa, amaphoyisa, uMshushisi Womphakathi, kanye nezinkantolo. Amacala obugebengu ngokuvamile aqala lapho isisulu sifaka isikhalazo ngomuntu osolwayo esiteshini samaphoyisa sendawo. Amaphoyisa anomsebenzi wokuphenya amacala asolwayo, kanti uMshushisi woMphakathi ubeka ummangalelwa amacala enkantolo.
Uhlelo lwenkantolo ye-UAE luhlanganisa izinkantolo ezintathu eziyinhloko:
Inkantolo Yokuqala: Uma esanda kufakwa, wonke amacala obugebengu eza kule nkantolo. Inkantolo iqukethe ijaji elilodwa elilalela icala futhi likhiphe isahlulelo. Nokho, amajaji amathathu alalela futhi anqume icala ecaleni lobugebengu (elinezijeziso ezinzima). Asikho isidingo sokuqulwa kwecala labahluleli kulesi sigaba.
Inkantolo Yokudluliswa Kwamacala: Ngemva kokuthi Inkantolo Yesimo Sokuqala ilethe isinqumo sayo, noma yiliphi iqembu lingafaka isikhalazo eNkantolo Yokudluliswa Kwamacala. Sicela uqaphele ukuthi le nkantolo ayilulaleli kabusha lolu daba. Kufanele kuphela inqume ukuthi kube nephutha yini esinqumweni senkantolo encane.
Inkantolo yeCassation: Noma yimuphi umuntu onganelisekile ngesinqumo seNkantolo Yokudlulisa Amacala angaqhubeka nokufaka isikhalo eNkantolo yeCassation. Isinqumo sale nkantolo siwujuqu.
Ukuhlukaniswa Kwamacala kanye Nobugebengu emthethweni wobugebengu we-UAE
Ngaphambi kokufaka isikhalazo sobugebengu, kubalulekile ukufunda izinhlobo zamacala namacala ngaphansi komthetho we-UAE. Kunezinhlobo ezintathu zamacala amakhulu nezijeziso zawo:
Ukwephulwa (Ukwephulwa): Lesi isigaba esinzima kakhulu noma icala elincane lamacala e-UAE. Kubandakanya noma yisiphi isenzo noma ukweqiwa okuheha isijeziso noma isijeziso esingeqi izinsuku eziyi-10 ejele noma inhlawulo enkulu yama-dirham ayi-1,000.
Amaphutha: Isenzo esingalungile sijeziswa ngokuvalelwa, inhlawulo engu-1,000 kuya ku-10,000 dirham kakhulu, noma ukudingiswa. Icala noma isijeziso singaheha I-Diyyat, inkokhelo yamaSulumane "yemali yegazi".
Izigebengu: Lawa ngamacala anzima kakhulu ngaphansi komthetho we-UAE, futhi ajeziswa ngokuboshwa udilikajele, ukufa, noma I-Diyyat.
Ingabe Izinhlawulo Zenkantolo Yobugebengu Ziyakhokhwa Kulowo Oyisisulu?
Cha, izinhlawulo zenkantolo yobugebengu zikhokhelwa uhulumeni.
Ingabe Kuzobiza Ukufaka Isikhalo Phambi Kwamaphoyisa?
Ngeke kube nezindleko zokufaka isikhalo emaphoyiseni.
Ukufaka Isikhalazo Sobugebengu e-UAE
E-UAE, ungafaka isikhalazo sobugebengu ngokuhamba uye esiteshini samaphoyisa esiseduze, eduze nalapho ubhekane khona nobugebengu. Nakuba ungafaka isikhalo ngomlomo noma ngokubhala phansi, kufanele sibeke ngokucacile izehlakalo ezenza icala lobugebengu. Ngemva kokufaka isikhalazo sakho, amaphoyisa azorekhoda inguqulo yakho yezehlakalo ngesi-Arabhu, oyobe usuyisayina.
Ngaphezu kokwenza isitatimende somlomo noma esibhaliwe, umthetho we-UAE ikuvumela ukuthi ubize ofakazi ukuze uqinisekise indaba yakho. OFakazi bangasiza ekunikezeni umongo owengeziwe noma banikeze ubuqiniso esicelweni sakho. Lokhu kwenza indaba yakho ikholeleke kakhudlwana futhi kunikeza usizo olubalulekile ophenyweni olulandelayo.
Uphenyo lobugebengu luzobandakanya imizamo yokuqinisekisa izici zendaba yakho kanye nokulandelela umsolwa. Ukuthi uphenyo luqhubeka kanjani kuzoncika ohlotsheni lwesikhalazo sakho nokuthi iyiphi i-ejensi enamandla okuphenya isikhalazo. Ezinye zeziphathimandla ezingabamba iqhaza ophenyweni zihlanganisa:
Izikhulu zezomthetho ezivela emaphoyiseni
Njengengxenye yophenyo, iziphathimandla zizophenya umsolwa bese zithatha isitatimende sazo. Futhi banelungelo lokuhlinzeka ngofakazi abangasekela inguqulo yabo yemicimbi.
Sicela uqaphele ukuthi umthetho we-UAE awudingi ukuthi ukhokhe noma yiziphi izimali ngaphambi kokufaka isikhalazo sobugebengu. Kodwa-ke, uma udinga usizo lommeli wobugebengu, uzoba nesibopho sezimali zabo zomsebenzi.
Ayoqala nini ukuqulwa kwamacala?
Icala lobugebengu lase-UAE liqala kuphela lapho uMshushisi Womphakathi enquma ukumangalela umsolwa enkantolo. Kodwa kunezinqubo ezikhethekile okufanele zenzeke ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke.
Okokuqala, uma amaphoyisa enze uphenyo olugculisayo, azodlulisela icala eHhovisi Lomshushisi Womphakathi. Umshushisi Womphakathi unamandla amakhulu okusungula nokunqamula amacala obugebengu e-UAE, ngakho inqubo ayikwazi ukuqhubeka ngaphandle kwemvume yakhe.
Okwesibili, uMshushisi Womphakathi uzomema futhi ngokwehlukana axoxisane nommangali nomsolwa ukuze aqinisekise ngezindaba zabo. Okwamanje, noma yiliphi iqembu lingaveza ofakazi ukuze baqinisekise i-akhawunti yabo futhi lisize Umshushisi Womphakathi anqume ukuthi inkokhelo iyadingeka yini. Izitatimende kulesi sigaba nazo zenziwa noma zihunyushelwe olimini lwesi-Arabhu futhi zisayinwe yizinhlangothi zombili.
Ngemuva kwalolu phenyo uMshushisi woMphakathi uzonquma ukuthi umsolwa uzombeka yini icala enkantolo. Uma bethatha isinqumo sokubeka umsolwa icala, icala lizoqhubeka liqulwe. Icala liyincwadi enemininingwane ngecala elisolwayo futhi libiza umsolwa (manje osebizwa ngommangalelwa) ukuba avele eNkantolo Yokuqala. Kodwa uma uMshushisi woMphakathi enquma ukuthi isikhalo asinasizathu, udaba luphelela lapha.
Ungalibika Kanjani Ubugebengu noma Ubhalise Icala Lobugebengu e-UAE?
Uma uyisisulu sobugebengu noma wazi ngobugebengu obenziwayo, kungase kudingeke ukuthi uthathe izinyathelo ezithile zokuzivikela futhi uqinisekise ukuthi iziphathimandla ezifanele ziyaziswa. Umhlahlandlela olandelayo uzokunikeza ulwazi ngokubika ubugebengu noma ukubhalisa icala lobugebengu e-United Arab Emirates (UAE).
Ungaliqala Kanjani Icala Lobugebengu e-UAE?
Uma unqume ukuvulela omunye umuntu icala lobugebengu, kunezinyathelo ezimbalwa ozodinga ukuzithatha.
1) Faka umbiko wamaphoyisa - Lesi isinyathelo sokuqala kunoma yiliphi icala lobugebengu, futhi kufanele uxhumane nesiteshi samaphoyisa esinegunya phezu kwendawo lapho kwenzeke khona ubugebengu. Ukuze ufake umbiko wamaphoyisa, uzodinga ukugcwalisa umbiko olungiselelwe umhloli wezokwelapha ogunyazwe uhulumeni obhala ngokulimala okubangelwe ubugebengu. Kufanele futhi uzame ukuthola amakhophi anoma yimiphi imibiko yamaphoyisa efanele kanye nezitatimende zofakazi uma kungenzeka.
2) Lungiselela ubufakazi - Ngaphezu kokufaka umbiko wamaphoyisa, ungase futhi ufune ukuqoqa ubufakazi obusekela icala lakho. Lokhu kungase kuhlanganise, kodwa kungagcini kulokhu, okulandelayo:
Noma yimiphi imibhalo yomshwalense efanele
Ubufakazi bevidiyo noma bezithombe bokulimala okudalwe ubugebengu. Uma kungenzeka, kuwumqondo omuhle ukuthatha izithombe zanoma yikuphi ukulimala okubonakalayo ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemva kokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, ofakazi bangasetshenziswa njengomthombo obalulekile wobufakazi emacaleni amaningi obugebengu.
Amarekhodi ezokwelapha noma izikweletu eziqopha noma yikuphi ukwelashwa okutholwe ngenxa yobugebengu.
3) Xhumana nommeli - Uma usuqoqe bonke ubufakazi obudingekayo, kufanele uxhumane nommeli ummeli onolwazi lokuvikela ubugebengu. Ummeli angakusiza ukuthi uzulazule ohlelweni lwezobulungiswa bobugebengu futhi akunikeze izeluleko nokusekelwa okubalulekile.
4) Faka icala - Uma icala liqulwa, uzodinga ukufaka icala ukuze uphishekele amacala obugebengu. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa izinkantolo zomphakathi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kunemikhawulo yesikhathi yokuvula amacala obugebengu e-UAE, ngakho-ke kubalulekile ukuthintana nommeli ngokushesha okukhulu uma unquma ukuthatha isinyathelo somthetho.
Ingabe Lowo Oyisisulu Uyokwazi Ukuletha OFakazi?
Umuntu oyisisulu sobugebengu angase alethe ofakazi bazofakaza enkantolo uma icala liqulwa. Ngokuvamile, abantu bangabizwa yijaji futhi bayalwe ukuba bavele enkantolo.
Uma kutholwa ubufakazi obubalulekile ngemva kokuqala kwecala, kungase kwenzeke ngommangalelwa noma ummeli wakhe acele ukuthi ofakazi abasha bafakaze ngesikhathi sokulalelwa kwecala okulandelayo.
Yiziphi Izinhlobo Zobugebengu Ezingabikwa?
Ubugebengu obulandelayo bungabikwa emaphoyiseni e-UAE:
Amacala ahlobene nethrafikhi
Noma yibuphi obunye ubugebengu noma isenzo esiphula umthetho
Ezigamekweni ezixhumene nokuphepha noma ukuhlukumeza, amaphoyisa angatholakala ngokuqondile nge-Aman Service ku-8002626 noma nge-SMS ku-8002828. Ngaphezu kwalokho, abantu bangabika ubugebengu ku-inthanethi ngokusebenzisa Iwebhusayithi yamaphoyisa e-Abu Dhabi noma kunoma yiliphi igatsha loMnyango Wokuphenya Ngobugebengu (CID) e-Dubai.
Ingabe Ufakazi Obalulekile Kufanele Afakaze Enkantolo?
Ufakazi obalulekile akadingi ukwethula ubufakazi enkantolo uma bengathandi. Ijaji lingase libavumele ukuthi bafakaze kumabonakude ovaliwe uma besaba ukufakaza mathupha. Ukuphepha kwabahlukunyezwayo kuhlala kuseqhulwini, futhi inkantolo izothatha izinyathelo zokubavikela kunoma yikuphi ukulimala okungenzeka.
Izigaba Zesivivinyo Sobugebengu sase-UAE: Umthetho Wezinqubo Zobugebengu Wase-UAE
Amacala obugebengu ezinkantolo ze-UAE aqhutshwa ngesi-Arabhu. Njengoba isi-Arabhu siwulimi lwenkantolo, yonke imibhalo ethunyelwe ngaphambi kwenkantolo kufanele ihunyushwe noma ibhalwe ngesi-Arabhu.
Inkantolo inegunya eliphelele ekuqulweni kwecala lobugebengu futhi iyonquma ukuthi icala liqhubeka kanjani ngokwamandla alo ngaphansi komthetho. Okulandelayo yincazelo emfushane yezigaba ezibalulekile zecala lobugebengu laseDubai:
Ukubekwa icala: Icala liqala lapho inkantolo ifundela abasolwa icala bese ibabuza ukuthi baliphika kanjani. Ummangalelwa angalivuma noma aliphike icala. Uma belivuma icala (futhi ngecala elifanele), inkantolo izokweqa izigaba ezilandelayo bese iqonda ngqo ekukhipheni isinqumo. Uma ummangalelwa eliphika icala, ukuqulwa kwecala kuzoqhubeka.
Icala labashushisi: Umshushisi womphakathi uzokwethula udaba lwakhe ngokwenza isitatimende sokuvula, abize ofakazi, kanye nobufakazi bethenda ukukhombisa icala lommangalelwa.
Icala likammangalelwa: Ngemva kokushushiswa, ummangalelwa angaphinde abize ofakazi kanye nobufakazi bethenda esebenzisa ummeli wabo ekuzivikeleni kwabo.
isinqumo: Inkantolo izonquma ngecala lommangalelwa ngemva kokulalela abathintekayo. Uma inkantolo ithola ummangalelwa enecala, ukuqulwa kwecala kuzoqhubeka nokukhipha isigwebo, lapho inkantolo izokhipha isijeziso. Kodwa uma inkantolo inquma ukuthi ummangalelwa akenzanga icala, izomkhulula ummangalelwa ecaleni, futhi ukuqulwa kwecala kuzophelela lapha.
Isigwebo: Uhlobo lwecala yilona oluyonquma ubucayi besijeziso ummangalelwa abhekene naso. Ukwephula umthetho kunezigwebo ezilula, kanti icala lizoletha isijeziso esinzima kakhulu.
Sokudlulisa: Uma umshushisi noma ummangalelwa enganelisekile ngesinqumo senkantolo, angadlulisela icala. Nokho, isisulu asinalo ilungelo lokukhalaza.
Kuthiwani Uma Isisulu Sikwelinye Izwe?
Uma isisulu singekho e-UAE, basenganikeza ubufakazi bokusekela icala lobugebengu. Lokhu kungenziwa kusetshenziswa inkomfa ngevidiyo, ukufakwa ku-inthanethi, nezinye izindlela zokuqoqa ubufakazi.
Uma Isisulu Sifuna Ukuhlala Singaziwa, Ingabe Lokho Kuzovunyelwa?
Uma isisulu sobugebengu sinquma ukuthi sifuna ukuhlala singaziwa, lokho kuzovunyelwa ezikhathini eziningi. Kodwa-ke, lokhu kungase kuncike ekutheni icala lihlobene yini nenkinga yokuphepha noma yokuhlukumeza.
Ingabe Kuyenzeka Ukuphishekela Icala Lobugebengu Uma Umenzi Wobubi Engatholakali?
Yebo, kungenzeka ukuphishekela icala lobugebengu kwezinye izimo, ngisho noma umenzi wobubi engatholakali. Ake sithi isisulu siqoqe ubufakazi obubonisa ukuthi balimala kanjani futhi singanikeza imibhalo ecacile yokuthi isigameko senzeke nini futhi kuphi. Uma kunjalo, kuzokwazi ukuqhubeka necala lobugebengu.
Izisulu Zingawufuna Kanjani Ukulimala?
Izisulu zingafuna umonakalo ngezinqubo zasenkantolo namacala omphakathi afakwe e-UAE. Inani lesinxephezelo kanye nokubuyiselwa izisulu ezitholwayo liyahlukahluka kuye kwelinye icala. Uma ungathanda ulwazi olwengeziwe ngokufaka icala lomphakathi ngokulimala komuntu siqu, ungathintana nommeli wokulimala komuntu siqu e-UAE.
Izisulu Zingalufuna Kuphi Usizo Olwengeziwe?
Uma ungathanda ukuxhumana nomhlinzeki wesevisi, izinhlangano ezisiza abahlukunyeziwe noma izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni endaweni yangakini zingakunikeza ulwazi nokusekelwa. Lokhu kubandakanya:
I-UAE Crime Victim Support Centre
Izisulu Zobugebengu Bamazwe Ngamazwe
Inxusa laseBrithani eDubai
I-UAE Federal Transport Authority (FTA)
I-Federal Traffic Council
Ikomkhulu Lamaphoyisa AseDubai - CID
Umnyango Jikelele Wezokuphepha Zombuso wase-Abu Dhabi
Ihhovisi Lezokushushiswa Komphakathi
Kwenzekani Ngemva Kokuqalwa Kwecala Lobugebengu?
Uma isikhalo sibikwa, amaphoyisa azosidlulisela eminyangweni efanele (umnyango wezokwelashwa kwe-forensic, umnyango wobugebengu be-elekthronikhi, njll.) ukuze sibuyekezwe.
Amaphoyisa ayobe esedlulisela isikhalo kubashushisi bomphakathi, lapho umshushisi ezojutshwa ukuba asibuyekeze ngokwemibandela yomthetho. Ikhodi Yenhlawulo yase-UAE.
Ingabe Isisulu Singakwazi Ukunxeshezelwa Ngesikhathi Esichithwe Enkantolo?
Cha, izisulu azinxeshezelwa ngesikhathi esichithwa enkantolo. Kodwa-ke, bangase babuyiselwe izindleko zokuhamba nezinye kuye ngecala labo.
Ithini Iqhaza Lobufakazi Be-Forensic Emacaleni Obugebengu?
Ubufakazi be-forensic buvame ukusetshenziswa emacaleni obugebengu ukuthola amaqiniso esigameko. Lokhu kungafaka ubufakazi be-DNA, izigxivizo zeminwe, ubufakazi be-ballistics, nezinye izinhlobo zobufakazi besayensi.
Ingabe Isisulu Singakwazi Ukunxeshezelwa Ngezindleko Zokwelashwa?
Yebo, izisulu zinganxeshezelwa ngezindleko zokwelashwa. Uhulumeni angase futhi abuyisele izisulu ngezindleko zokwelashwa ezitholwe ngesikhathi siboshiwe kwezinye izimo.
Ingabe Izaphulamthetho kanye Nezisulu Kudingeka Ukuthamela Ukulalelwa Kwezinkantolo?
Bobabili abenzi bomthetho kanye nezisulu balindeleke ukuba beze ezinkantolo. Abenzi bomthetho abehluleka ukuvela bazoquliswa icala bengekho, kanti izinkantolo zingakhetha ukuhoxisa amacala abhekiswe kwabahlukunyeziwe abehlulekayo ukwethamela ukuqulwa kwamacala. Kwesinye isikhathi, isisulu singabizwa ukuthi sizofakaza njengofakazi womshushisi noma ummeli.
Kwezinye izimo, isisulu kungase kungadingeki ukuba eze ekuqulweni kwecala enkantolo.
Ithini Iqhaza Lamaphoyisa Emacaleni Obugebengu?
Amaphoyisa azobe esedlulisela isikhalazo kubashushisi bomphakathi, lapho umshushisi ezonikezwa khona ukuthi asibuyekeze ngokweKhodi Yenhlawulo ye-UAE.
Amaphoyisa nawo azophenya ngesikhalo bese eqoqa nobufakazi obuzoseka icala. Bangase futhi babophe futhi bavalelwe umenzi wobubi.
Ithini Iqhaza Lomshushisi Emacaleni Obugebengu?
Uma isikhalo sidluliselwa kubashushisi bomphakathi, umshushisi uzonikezwa umsebenzi wokusibuyekeza. Umshushisi uyobe esethatha isinqumo sokuthi uyalishushisa yini icala noma cha. Bangase bakhethe nokulesula icala uma bungekho ubufakazi obanele bokulisekela.
Umshushisi uzophinde asebenzisane namaphoyisa ukuze aphenye ngesikhalo futhi aqoqe nobufakazi. Bangase futhi babophe futhi bavalelwe umenzi wobubi.
Kwenzekani Emacaleni Enkantolo?
Uma umenzi wecala eboshiwe, uzolethwa enkantolo ukuze kuqulwe icala. Umshushisi uzokwethula ubufakazi enkantolo, futhi umenzi wecala angaba nommeli ozommela.
Umhlukunyezwa angase futhi athamele ukuqulwa kwecala futhi angabizwa ukuba azofakaza. Ummeli naye angamela lowo ohlukunyeziwe.
Ijaji liyobe selithatha isinqumo sokuthi liyamdedela yini lowo onecala noma ligcinwe esitokisini. Uma umenzi womthetho ededelwa, kuyodingeka ukuthi eze ezigcawini ezizayo. Uma umenzi womthetho egcinwe esitokisini, ijaji lizomemezela isigwebo.
Izisulu zingase futhi zivulele umenzi icala icala.
Kwenzekani Uma Isephulamthetho Sehluleka Ukuvela Enkantolo?
Uma umenzi wecala ehluleka ukuvela enkantolo, ijaji lingakhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe. Lowo onecala angase futhi aquliswe icala lapho engekho. Uma lowo onecala etholakala enecala, angase agwetshwe ukugqunywa ejele noma ezinye izinhlawulo.
Ithini Iqhaza Lommeli Wezokuvikela Emacaleni Obugebengu?
Ummeli kammangalelwa unomthwalo wemfanelo wokuvikela umehluleli enkantolo. Bangase baphikisane nobufakazi obethulwe umshushisi bese bephikisa ukuthi umenzi wecala kufanele akhululwe noma anikezwe isigwebo esincishisiwe.
Nansi eminye yemisebenzi eyenziwa ummeli wobugebengu emacaleni obugebengu:
Ummeli kammangalelwa angakhulumela umephulamthetho ekuqulweni kwamacala enkantolo.
Uma icala ligcina ngokugwetshwa, ummeli uzosebenzisana nommangalelwa ukuze anqume isigwebo esifanele kanye nezimo ezinciphisayo ukuze kuncishiswe isigwebo.
Lapho exoxisana nomshushisi ngesivumelwano sokuvuma icala, ummeli kammangalelwa angase alethe isiphakamiso sokuthi kwehliswe isigwebo.
Ummeli kammangalelwa unesibopho sokumela ummangalelwa ekuqulweni kwesinqumo.
Ingabe Izisulu Zivunyelwe Ukufuna Usizo Lwezomthetho?
Yebo, izisulu zingafuna usizo lwezomthetho kubameli ngesikhathi sokuqulwa kwamacala obugebengu. Nokho, ubufakazi bomuntu ohlukunyeziwe bungase busetshenziswe njengobufakazi obumelene nommangalelwa ngesikhathi sokuqulwa kwecala, ngakho ummeli wabo kuyodingeka akwazi lokhu.
Ukufaka Izikhalazo Enkantolo
Uma umuntu esolwa ngobugebengu, angalivuma noma angabi nacala.
Uma lowo muntu elivuma icala, inkantolo izomgweba ngokusekelwe ebufakazini obuveziwe. Uma lowo muntu eliphika icala, inkantolo izobeka usuku lokuqulwa kwecala, bese lowo onecala adedelwe ngebheyili. Ummeli kammangalelwa uyobe esesebenzisana nomshushisi ukuqoqa ubufakazi kanye nofakazi.
Lowo owenze icala uzophinde avunyelwe isikhathi esithile ukuze enze isivumelwano sokuvuma icala nomshushisi. Inkantolo ingase ibeke olunye usuku lokuqulwa kwecala noma yamukele isivumelwano esenziwe yizinhlangothi zombili.
Kuzothatha Isikhathi Esingakanani Ukulalelwa?
Ngokuya ngobubi bobugebengu, ukulalelwa kwecala kungathatha noma yikuphi ukusuka emaminithini ambalwa ukuya ezinyangeni ezimbalwa. Emacaleni amancane lapho ubufakazi bucacile, kungathatha izinsuku ezimbalwa kuphela ukuthi ukulalelwa kuqedwe. Ngakolunye uhlangothi, amacala ayinkimbinkimbi ahilela abamangalelwa abaningi nofakazi angase adinge izinyanga noma iminyaka yokuqulwa kwecala ngaphambi kokuba aqedwe. Uchungechunge lokulalelwa kwecala luzokwenzeka cishe emavikini angu-2 kuya kwangu-3 ngokuhlukana kuyilapho abathintekayo befaka amamemorandamu ngokusemthethweni.
Ithini Iqhaza Lommeli Wozisulu Emacaleni Obugebengu?
Isephulamthetho singagwetshwa futhi siyalwe ukuba sikhokhele isisulu isinxephezelo kwezinye izimo. Ummeli womhlukumezi uzosebenzisana nenkantolo ngesikhathi sokugwetshwa noma ngokuhamba kwesikhathi ukuqoqa ubufakazi ukuze kutholwe ukuthi umenzi wobugebengu unawo yini amandla ezimali okunxephezela isisulu.
Ummeli womhlukunyezwa angase futhi abamele emacaleni amademeshe abhekiswe kwabaphula umthetho.
Uma usolwa ngokwenza ubugebengu, kubalulekile ukufuna usizo lommeli wobugebengu. Bazokwazi ukukweluleka ngamalungelo akho futhi bakumelele enkantolo.
Uma umenzi womthetho engajabule ngesinqumo, angafaka isikhalo enkantolo ephakeme. Inkantolo ephakeme izobe isibuyekeza ubufakazi futhi ilalele izimpikiswano ezivela kuzo zombili izinhlangothi ngaphambi kokuthatha isinqumo.
Ummangalelwa unikezwa izinsuku ezingu-15 zokuphikisa isinqumo seNkantolo Esheshayo eNkantolo Yokudlulisa Amacala kanye nezinsuku ezingu-30 zokufaka isikhalazo ngokumelene nesinqumo seNkantolo Yokudlulisa Amacala.
Isibonelo Secala Lobugebengu e-UAE
Sethula imininingwane eqondile yecala lobugebengu elimayelana necala lokwehlisa isithunzi ngaphansi komthetho wase-United Arab Emirates ukukhombisa ukusebenza kwenqubo yobugebengu.
Ulwazi Olungemuva mayelana Necala
Icala lobugebengu lokunyundela nokuhlambalaza lingavulelwa umuntu ngaphansi kwe-Athikili 371 ukuya ku-380 ye-United Arab Emirates Penal Code (Federal Law No. 3 of 1987) ngaphansi komthetho we-UAE.
Ngaphansi kwe-Athikili 282 kuya ku-298 ye-UAE Civil Code (Federal Law No. 5 of 1985), Ummangali angase akwazi ukufaka isimangalo somphakathi ngomonakalo osuka emisebenzini engafanele.
Kuyenzeka ukumangalela othile icala lokwehliswa kwesithunzi somphakathi ngaphandle kokutholwa enecala lobugebengu, kodwa izimangalo zokwehliswa kwesithunzi somphakathi ziyaziwa ukuthi kunzima ukuzisungula, futhi ukutholwa enecala lobugebengu kuzonikeza ubufakazi obuqinile obumelene noMmangalelwa okufanele asekele kuso isinyathelo somthetho.
E-United Arab Emirates, abamangali esenzweni sobugebengu sokwehliswa isithunzi akudingeki babonise ukuthi balimele ngokwezimali.
Ukuze kutholwe isimangalo esingokomthetho samademeshe, Ummangali kuyodingeka abonise ukuthi ukuziphatha okwehlisa isithunzi kubangele ukulahlekelwa kwezimali.
Kulokhu, ithimba lezomthetho limelele inkampani ngempumelelo (“Umfakisicelo”) engxabanweni yokwehliswa isithunzi ebhekiswe komunye wezisebenzi zayo zangaphambili (“Ummangalelwa”) ngama-imeyili.
Ummangali wafaka isimangalo emaphoyiseni aseDubai ngoFebhuwari 2014, ethi isisebenzi sakhe sangaphambili wenza izinsolo ezihlambalazayo nezilulazayo ngoMmangali kuma-imeyili ayebhekiswe kummangali, abasebenzi kanye nomphakathi.
Amaphoyisa adlulisele isikhalo ehhovisi lomshushisi ukuze sibuyekezwe.
Abashushisi Bomphakathi banqume ukuthi ubugebengu benziwe ngaphansi kwe-Athikili 1, 20, kanye no-42 ye-UAE Cyber ​​Crimes Law (Federal Law No. 5 of 2012) base bedlulisela udaba eNkantolo ye-Misdemeanor ngoMashi 2014.
I-Athikili 20 kanye ne-42 yoMthetho Wobugebengu Be-Cyber ​​​​ibeka ukuthi noma yimuphi umuntu othuka umuntu wesithathu, okuhlanganisa nokubeka umuntu wesithathu isigameko esingase sijezise omunye umuntu noma adelelwe abanye abantu ngokusebenzisa ithuluzi lobuchwepheshe bolwazi noma inethiwekhi yolwazi. , ungaphansi kokuboshwa kanye nenhlawulo esukela ku-AED 250,000 kuya ku-500,000 okuhlanganisa nokudingiswa.
INkantolo Yobugebengu Yokuqala yathola ngoJuni 2014 ukuthi Ummangalelwa wasebenzisa izindlela ze-elekthronikhi (ama-imeyili) ukuze enze izimangalo ezihlambalazayo nezihlambalazayo ezimelene noMmangali nokuthi amazwi anjalo okunyundela angenza uMmangali edelelekile.
Inkantolo iyalele ukuthi Ummangalelwa axoshwe e-United Arab Emirates futhi aphinde ahlawuliswe i-AED 300,000. Ecaleni lamademeshe, inkantolo iphinde yakhipha umyalelo wokuthi uMmangali abuyiselwe imali yakhe.
Ummangalelwa wabe esedlulisela icala eNkantolo Yokudlulisa Amacala isinqumo senkantolo encane. INkantolo Yokudlulisa Amacala yasisekela isinqumo senkantolo ephansi ngoSepthemba 2014.
Ngo-October 2014, ummangalelwa wadlulisela lesi sinqumo eNkantolo Yomthetho, ethi sasisekelwe ekusetshenzisweni kabi komthetho, asinasizathu, futhi silimaza amalungelo akhe. Ummangalelwa uqhube wathi ukhulume ngobuqotho futhi ubengaqondile ukulimaza isithunzi sommangali.
Izinsolo zoMmangalelwa zokwethembeka kanye nenhloso enhle yokushicilela amagama anjalo zinqatshwe yiNkantolo Yokudluliswa Kwamacala, igcina isinqumo seNkantolo Yokudlulisa Amacala.
Ukumelwa Okusemthethweni Kusukela Ophenyweni Lwamaphoyisa Kuya Ekuveleni Kwezinkantolo
Abameli bethu bomthetho wobugebengu banamalayisensi aphelele futhi banolwazi oluningi ezindaweni eziningi zomthetho. Ngokufanelekile, sihlinzeka ngohlu olugcwele lwezinsizakalo zomthetho wobugebengu kusukela ngesikhathi sokuboshwa kwakho, kulo lonke uphenyo lobugebengu kuya ekuveleni enkantolo nasezikhalweni lapho sisebenza namakhasimende ethu asolwa ngobugebengu. Amanye amasevisi omthetho wobugebengu esiwahlinzekayo ahlanganisa:
Umsebenzi oyinhloko wommeli wobugebengu uwukumela amakhasimende akhe; sisebenzisana eduze namakhasimende ethu, kusukela ophenyweni lwamaphoyisa lokuqala kuya ekuveleni enkantolo. Sinelayisensi yokumela amakhasimende phambi kwazo zonke izinkantolo ze-UAE, okuhlanganisa; (A) Inkantolo Yokuqala, (B) Inkantolo yeCassation, (C) Inkantolo Yokudlulisa Amacala, kanye ne (D) Inkantolo Ephakeme Yombuso. Siphinde futhi sinikeze izinsizakalo zomthetho, ukubhala imibhalo yezomthetho kanye nememorandamu yasenkantolo, isiqondiso, nokusekelwa kwamakhasimende eziteshini zamaphoyisa.
Simele Amakhasimende Ekuqulweni Kwecala noma Ukuqulwa Kwamacala Enkantolo
Indawo lapho abameli bethu bobugebengu e-UAE behlinzeka ngokusekela kusesikhathini ukuqulwa kwecala noma ukuqulwa kwecala. Bazosebenza njengabeluleki bezomthetho kumakhasimende abo ngesikhathi sokuqulwa kwecala futhi bawasize ekulungiseleleni. Uma inkantolo ivuma, ummeli wezobulungiswa bobugebengu uzobuza ofakazi, enze izitatimende zokuvula, ethule ubufakazi, futhi aphendule imibuzo.
Noma ngabe amacala akho obugebengu awokwephula okuncane noma ubugebengu obukhulu, usengozini yokujeziswa kanzima uma utholwa unecala. Izijeziso ezingase zibe khona zihlanganisa izinhlawulo zentambo, ukuboshwa udilikajele, izigwebo zejele ezishiwo, ilungelo lokugcinwa yinkantolo, izinhlawulo zenkantolo, nezijeziso. Ngaphandle kwale miphumela engaba nzima, Umthetho wobugebengu wase-UAE kuyinkimbinkimbi, futhi a onamakhono umthetho wobugebengu e-Dubai ungase ube umehluko phakathi kwenkululeko nokuboshwa noma inhlawulo yemali eshisiwe kanye nencane kakhulu. Funda amasu okuvikela noma ukuthi ungalwa kanjani necala lakho lobugebengu.
Singumholi owaziwayo emkhakheni wezomthetho wobugebengu e-UAE, onolwazi olubanzi nolwazi ekusingatheni amacala obugebengu nezinqubo zobugebengu kuyo yonke i-UAE. Ngokuhlangenwe nakho kwethu nolwazi ohlelweni Lwezomthetho lwase-United Arab Emirates, sikwazile ukwakha igama elihle ngesisekelo samakhasimende esikhulu. Sisiza abantu base-UAE ukuthi babhekane nezinkantolo ze-UAE kanye nezindaba zezomthetho.
Kungakhathaliseki ukuthi uphenyiwe, uboshiwe, noma ubekwe icala lobugebengu e-United Arab Emirates, kubalulekile ukuba nommeli oyiqondayo imithetho yezwe. Umthetho wakho ukubonisana nathi izosisiza siqonde isimo sakho nezinto ezikukhathazayo. Xhumana nathi ukuze uhlele umhlangano.
Sishayele manje ukuze uthole i Ukuqokwa Okuphuthumayo Nomhlangano kokuthi +971506531334 +971558018669
Kunesixazululo sazo zonke izinkinga
Abameli abaphambili bezobugebengu eDubai, e-UAE
Izingcingo Eziphuthumayo +971506531334 +971558018669